कर्णाली प्रादेशिक संग्राहलय : रङ्ग फेरियो, रूप फेरिँदै
सुर्खेत – वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रादेशिक संग्राहलय छ ।
विसं २०५७ साल साउन २ गते सोमवारका दिन उद्घाटन गरिएको उक्त संग्राहलय २०७५ साल असोज ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत आएको छ ।
संग्रहालयमा ऐतिहासिक काँक्रेबिहारबाट प्राप्त पुरातात्विक वस्तुहरू, कलात्मक प्रस्तर मूर्तिहरू, फलामका प्राचिन हुकहरू राखिएका छन् । प्राचीन माटाका भाँडाहरू, जुम्लाबाट प्राप्त माटोका चःचहरू, हिमाली भेगका लामाहरूको संस्कृति झल्काउने भेषभुषा, भाँडा वर्तन, परम्परागत तोरी पेल्ने काठको कोल, काठमो मदुस, ढिकी, जाँतो, प्राचीन पानी घडी, थांका, माझी जातिसँग सम्वन्धित माछा मार्ने जाल, सुन चाल्न प्रयोग हुने काठका सामाग्रीहरू पनि त्यहाँ छन् ।
तत्कालीन भेरी, कर्णाली राप्ती अञ्चलका कला, साहित्य, संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि उक्त संग्राहलय खोलिएको थियो ।
संग्राहलयमा संकलित सामाग्रीहरू अहिलेको पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्ने बाँके, बर्दिया, रुकुम पूर्वका हुन् । तर देश नयाँ संरचनामा गएसँगै भएको परिवर्तनमा अब संग्राहलयमा कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटका कला साहित्य, संस्कार, परम्पराले प्राथमिकता पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको संग्राहलयमा अब कर्णालीको वास्तविक चित्र प्रष्ट देख्न सकिने भएको हो ।
रंग फेरियो,रूप फेरिँदै
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा संग्राहलयका लागि एक करोड बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आएको एक करोड बजेटले संग्राहलयको रंगरोगन गरिएको र एक सानो भवन बनाइएको नि. प्रमुख डबल प्रसाद शर्माले लोकान्तरलाई बताए ।
‘२०७६ जेठमा हामीलाई काम गर्न पूर्ण अख्तियारी आएकोमा समय अभावका कारण हामीले सबै काम गर्न सकेनौं । उतिबेला कार्यालय प्रमुख अर्कै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले संघमा समायोजन रोजेर जेठ १२ गते सरुवा भइसकेपछि काम गर्नै सकिएन,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीले ३५ लाख रुपैयाँ मर्मत सम्भार तथा रंगरोगनमा खर्चेका छौं ।’
हाल संग्राहलय सीसीटीभी क्यामेरामय छ । प्रदेश सरकारको पाँच लाखमा पन्ध्र वटा क्यामेरा जडान गरिएको छ । अझैपनि केही क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने अधिकृत शर्माको भनाइ छ ।
मौलिक पहिचान झल्किने संग्राहलय बनाइने
कर्णाली प्रदेशमा रहेको एक मात्र प्रादेशिक संग्राहलयलाई कर्णाली मैत्री संग्राहलयको रूपमा निर्माण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
‘कर्णालीका मौलिक पहिचान, कला, साहित्य, प्रचलन, पौराणिक सम्पदाका तस्वीरहरूको संकलन, संरक्षण गर्ने र खस भाषा मैत्री संग्राहलय बनाउने गरी मन्त्रालयमा छलफल अघि बढिरहेको छ,’ नि. प्रमुख शर्माले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले संग्राहलयको लागि एक नयाँ भवनका लागि पचास लाख तथा प्रादेशिक पुस्तकालयका लागि पचास लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अबको केही दिनमा नै हामी टेण्डर प्रक्रियामा जाँदैछौं र संग्राहलयको उद्घाटन मन्त्री दल रावलले गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ ।’
उनले प्रादेशिक पुस्तकालयमा राखिने पुस्तकहरू कर्णालीको बारेमा जानकारी दिने खालका हुने बताए । ‘हाम्रो खस भाषा, हाम्रो मौलिक साहित्य र संस्कृति तथा कर्णालीबारे लेखिएका पुस्तकहरू हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसका अलवा अन्य पुस्तकहरू केन्द्रीय पुस्तकालयसँग समन्वय गरेर राख्नेगरी योजना बनाइरहेका छौं ।’
उनले संग्राहलयमा पुरातात्विक विभागमा रहेका सामाग्रीहरू विभागसँगको सहकार्यमा कर्णालीमा ल्याइने बताए ।
आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै
संग्राहलयमा राखिएका वस्तुहरूको अवलोकन गर्न आउनेहरूको संख्या विस्तारै बढ्दै गएको छ । हाल दैनिक पचासभन्दा बढी पर्यटकहरू संग्राहलय हेर्न आउने गरेका छन् ।
संग्राहलयमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आउने गरेका छन् । विद्यार्थीले पाँच, अन्य व्यक्तिले दश रुपैयाँको टिकट काट्ने व्यवस्था छ । क्यामराको २०, सार्क देशका नागरिकले ५० र अन्य देशका नागरिकको हकमा १०० टिकट दर कायम गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म १६ हजार ७० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा ९१ हजार २५ रुपैयाँ संकलन भएको बताइएको छ ।
दरबन्दी कम,चाप बढी
प्रदेश सरकार मातहत रहेको उक्त संग्राहलय कर्णाली प्रदेशका अन्य कार्यालय जस्तै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । १३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म सबै कर्मचारी पठाउन नसक्दा गर्नैपर्ने कतिपय काम अघि बढाउन कार्यालयलाई समस्या भएको छ ।
हाल कार्यालयमा एक जना अधिकृत, दुई जना ग्यालरी गार्ड, कम्फू एक जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । गेटमा टिकट काट्ने जिम्मा खरदार तहका कर्मचारीको भएपनि कार्यालय सहयोगीको भरमा टिकट काटिँदै आएको छ ।
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौं:मन्त्री रावल
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्मचारीको व्यवस्थापन चाँडै गरिने बताए ।
‘संग्राहलयलाई ऐतिहासिक कर्णाली देखाउन मिल्ने खालको बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी त्यही अनुरूप बजेट पठाउने र त्यसलाई कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक संग्राहलय तथा पुस्तकालय बनाउन चाहिरहेका छौं । त्यसका लागि काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको हकमा ओएनएमका कारण केही ढिलाइ भएपनि अबको केही समयमै सकेसम्म दरबन्दी नै फुलफिल बनाउँछौं ।’